Into ekufuneka uyazi malunga nokuhambisa ngexesha leholide, ukuphazamiseka kwenkqubo yokuhambisa kunye nefuthe lango-2022
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Into ekufuneka uyazi malunga nokuhambisa ngexesha leholide, ukuphazamiseka kwenkqubo yokuhambisa kunye nefuthe lango-2022
Ngelixa iliza lesibini le-Covid-19 libonakala liyancipha, ubhubhani wehlabathi jikelele uhlala phantse kuzo zonke iikona zobomi bemihla ngemihla. Ubonelelo lwemveliso yabathengi, umzekelo, aluzinzanga. Ngamashalofu angenanto kubathengisi bezitena kunye nodaka kunye nokulibaziseka kokuthumela kubathengisi be-intanethi, abathengi bajongana nokungaqiniseki malunga nokufumana iimpahla abazifunayo - ngakumbi ukuya kwixesha lokuthenga iholide. Kwi-Q&A emfutshane, uChris Craighead, uJohn H. “Red” Dove uNjingalwazi kuLawulo lweeNtengo kunye neYunivesithi yaseTennessee, iKholeji yeHaslam yaseKnoxville yeKholeji yezoShishino kunye nengcali yokuphazamiseka kwekhonkco lokubonelela, kutsha nje ukujongana nokuthenga ngexesha leeholide kunye neenkxalabo zokuthumela kunye nokubonelela. iingxaki chain ngokubanzi.
Ngelixa iliza lesibini le-Covid-19 libonakala liyancipha, ubhubhani wehlabathi jikelele uhlala phantse kuzo zonke iikona zobomi bemihla ngemihla. Ubonelelo lwemveliso yabathengi, umzekelo, aluzinzanga. Ngamashalofu angenanto kubathengisi bezitena kunye nodaka kunye nokulibaziseka kokuthumela kubathengisi be-intanethi, abathengi bajongana nokungaqiniseki malunga nokufumana iimpahla abazifunayo - ngakumbi ukuya kwixesha lokuthenga iholide. Kwi-Q&A emfutshane, UChris Craighead, UJohn H. "Obomvu" uDove uNjingalwazi kwi-Supply Chain Management kunye neYunivesithi yaseTennessee, iKholeji ye-Haslam ye-Knoxville yoShishino kunye nengcali yokuphazamiseka kwe-supply chain, kutsha nje ukujongana nokuthengwa kwexesha leeholide kunye neenkxalabo zokuthumela kunye neengxaki zokubonelela ngokubanzi.
Umbuzo: INkonzo yePosi yase-US icebisa ukuthunyelwa kwe-imeyile ephantsi komhlaba ngo-Dec. 15, i-imeyile yodidi lokuqala ngo-Dec. 17, i-imeyile ephambili ngo-Dec. 18 kunye ne-priority mail express ngo-Dec. 23. Nangona kunjalo, i-mediastories yamva nje ibika ukuba abathengi kufuneka ba-odole kwaye ukuthumela izipho ngaphambi kweHalloween ukuqinisekisa ukuhanjiswa ngexesha leeholide. Ukuba ezi ngxelo zichanekile, ngaba lo ngumba wekhonkco lonikezelo?
A: Ngelixa ndingaqhelananga nophando olungemva kwezi ngxelo, ndiyakholelwa ukuba abathengi kufuneka bajonge kulo nyaka ngokwahlukileyo kunamaxesha adlulileyo eeholide. Lo ngumba kakhulu wekhonkco lonikezelo. Lo ngumba wesixokelelwano sobonelelo, kuba ingxaki esisiseko yeyokuba umthamo wokunikezela ngobunzima beepakethe/iimveliso uthintelwe zizinto ezininzi, ezifana nokunqongophala kwabasebenzi kunye nee-asethi zothutho (umz., iilori, iitreyila). Esi sikhundla sinyiniweyo, sinokubangela intshukumo ecothayo yephakheji kunye nolibaziseko olunokwenzeka.
Umbuzo: Yintoni, ukuba kukho nantoni na, abanokuyenza abathengi ukuqinisekisa ukufika kwangethuba kwezinto ezithengiweyo kweli xesha leeholide?
A: Ubuncinci zithathu izinto abathengi abanokuzenza ukunceda ukoyisa imiceli mngeni enokubakho.
Okokuqala, qala kwangoko. Njengoko kuxoxiwe ngasentla, ukuqala kwangaphambili ekuthengeni / ukuhambisa kunokuba luncedo. Ukuba abathengi aboneleyo baqala kwangoko, oku kuya kunceda ukunqanda i-spike enkulu ekuthunyelweni ngasekupheleni kukaNovemba nasekuqaleni kukaDisemba okunokuthi kugqithise umthamo oqingqiweyo wokuhanjiswa.
Okwesibini, susa ukuthunyelwa okongeziweyo. Umzekelo, abathengi be-intanethi banokuba neenkampani ezithumela ngokuthe ngqo kusapho kunye nabahlobo kunokuba bazithumelele ngokwabo kwaye bathumele usapho kunye nezihlobo.
Ekugqibeleni, khetha ukhetho lokuthumela kunye neenkampani ze-intanethi ngobulumko. Zonke iinketho zokuthumela azilingani ngokuthembeka kunye nesantya. Ngokukwanjalo, zonke iinkampani azinabuchule ngokulinganayo ekuthumeleni ngokukhawuleza nangokuthembekileyo kokuthengwa kwe-Intanethi.
Umbuzo: Ngaba zikho ezinye iinkxalabo zokubonelela abathengi ekufuneka bazi malunga nexesha leholide?
A: Iinkampani ezininzi zijongene nemiceli mngeni yokuphela kwesitokhwe kunye nokucotha kunokuzaliswa kwesiqhelo. Undoqo kukuba, kwiimeko ezininzi, sinemfuno ephezulu kunokubonelela. Abathengi kufuneka baqwalasele ubuncinci uhlengahlengiso ezimbini kwixesha labo leholide.
Okokuqala, musa ukothuka, kodwa yiba nobuchule. Ukungalingani phakathi konikezelo kunye nemfuno kunokubangela ukungafumaneki okunokuba ngumngeni njengoko siqhubela phambili ukuya ekupheleni kuka-2021.
Okwesibini, jonga uhlahlo lwabiwo-mali. Unikezelo/imfuno engahambelaniyo inokubangela (njengoko sele singqina) amaxabiso aphezulu. Ngaphezu koko, ngokubonelelwa okulinganiselweyo kweemveliso, abathengisi basenokungabi namdla wokubonelela ngezaphulelo ezinzulu. Sonke siyayithanda i-bargain kodwa ukubalinda kunokuba yingozi kulo nyaka.
UMBUZO: Ngelixa abathengi benokuthi babeke ityala kwiishelufa ezingenanto kwivenkile enkulu kuphela ekuphazamisekeni kokubonelela, ngaba izinto ezifana nokunqongophala kwabasebenzi kunye nokunqongophala kwezinto ezisetyenziswayo apha?
A: Ewe, kodwa ngokusisiseko zonke ezi zinokujongwa njengokuphazamiseka kwekhonkco lokubonelela okanye ubuncinci izehlo ezizibangelayo. Ngokomzekelo, ukuba inkampani yokuvelisa iceba ukuvelisa iiyunithi ezili-10,000 zemveliso ngexesha elithile, kodwa ukunqongophala kwabasebenzi kubangela kuphela umthamo owaneleyo wokuvelisa i-5,000, isicwangciso siphazamisekile. Ama-5,000 alahlekileyo anokubangela iishelufu ezingenanto kwezinye iindawo. Kwaye lo ngumzekelo nje omnye wemiba emininzi enokuthi ibe negalelo ekunqongophelweni kumakhonkco obonelelo.
Q: Okokugqibela, sihlala sisiva iingcali zithetha “ngesiqhelo esitsha” kumakhonkco obonelelo. Nangona kunjalo, njengoko sisondela esiphelweni sonyaka wesibini wobhubhane, ukukhathazeka kwabathengi kubonakala ngathi kuyakhula ukuba unikezelo lwemveliso alufumaneki lula. Ngaba ukunqongophala kweemveliso ezingapheliyo yinto entsha yesiqhelo?
A: Hayi. Andivumelani nala mabango angqingqwa, aphezulu "esiqhelo esitsha" kwiikhonkco zobonelelo. Kwiimeko ezininzi, izinto ziya kubuyela kwiimeko zangaphambi kwe-Covid. Kukho izinto ezimbalwa ezingaphandle koku, nangona kunjalo. Ndicinga ukuba siza kuqhubeka nokubona inqanaba elithile lokunqongophala njengoko amakhonkco obonelelo ebuyela kwindawo epheleleyo. Kwakhona, kukho imiba ethile yomthamo eya kuthatha ixesha elide ukuyilungisa, njengokunqongophala kwabaqhubi beelori.
Kwinqaku eliqaqambileyo, ndicinga ukuba kuya kubakho inqanaba le-Covid-induced innovation eliya kuthi liqhubele phambili amanye amakhonkco obonelelo ukuya kwinqanaba eliphezulu lokugqwesa, ukuze lizise ixabiso elininzi kumthengi. Ukuya kuthi ga kwinqanaba le, abathengi banokufumana "ngcono" eqhelekileyo.